Oovimba be-WTI-Funda ukurhweba
I-USOIL ikwiNgcaciso encinci, ijongene noKwaliwa kwi-87.50 yeedola
Ukuhlaziywa: 21 January 2022
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 80.00, i-$ 84.00, i-$ 88.00
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 66.00, $ 62.200, iirandi ezingama-58.00
USOIL ibikwi-uptrend kodwa ijongene nokukhatywa kwi-87.50 yeedola. Iphinda ilandele emva kokwaphuka ngaphezulu kochaso olungaphezulu. Isalathiso sifike kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike. Ijongene nokugatywa kwi-87.50 yeedola eziphezulu. Ukuchasana kwe-overhead akuzange kuphulwe ngenxa yokuba isalathisi sifikelele kwingingqi egqithisiweyo. Okwangoku, ngoDisemba 9 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 ye-Fibonacci extension okanye i-$ 81.51.
Ngenxa yokubuyisela kwangaphambili, i-USOIL iye yawa kwinqanaba le-66 ye-Relative Strength Index ixesha 14. Ibonisa ukuba isalathisi sikwindawo ye-uptrend kwaye iyakwazi ukunyuka ukuya phezulu. Ixabiso lesalathisi lingaphezulu kwe-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50-day SMA ebonisa ukunyuka okungaphezulu. Isalathiso sine-bullish crossover njengoko i-SMA yeentsuku ezingama-21 inqumla ngaphezu kwe-50 -day SMA ebonisa umyalelo wokuthenga.
USOIL (WTI) phakathi kwexesha eliphakathi: Ukuphelisa
Kwitshathi yeeyure ze-4, isalathisi sikwi-uptrend. Ixabiso lesalathiso lenza uluhlu oluphezulu oluphezulu kunye nenani eliphantsi. Okwangoku i-uptrend iye yapheliswa njengoko ikhefu lexabiso lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo kunye ne-bullish trendline.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-30% yestochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwisantya esiphezulu. Intshukumo eya phezulu iya kuqalisa kwakhona. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka. I-uptrend iye yapheliswa njengoko imivalo yexabiso ingaphantsi kwee-avareji ezihambayo.
I-USDOL ifikelele kwindawo ethengisiweyo yemarike kodwa ijongene nokugatywa kwi-87.50 yeedola. Imakethi ibuyisela umva ukusuka kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. I-uptrend iya kuphinda iqalise emva kokubuyisela okuncinci.
Phawula: I-Learn2Trade ayingomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na i-asethi yemali okanye imveliso okanye umsitho. Asinaxanduva ngesiphumo sakho sotyalo-mali
I-USOIL ifikelela kwiNgingqi eBotyolwe ngokugqithisileyo, isenokujamelana nokugatywa kwi-85.39 yeedola
Ukuhlaziywa: 15 January 2022
USOIL ibikwi-uptrend kodwa inokujongana nokukhatywa kwi-85.39 yeedola. Isalathiso siphinda sivavanye umgangatho wangaphambili we-85.39 yeedola. Kwinyathelo lexabiso langaphambili ngo-Oktobha noNovemba, iinkunzi zeenkomo zahluleka ukuphuka ngaphezu kokuchasana okuphezulu. Okwangoku, ngoDisemba 9 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 ye-Fibonacci extension okanye i-$ 81.61. Ukususela kwisenzo sexabiso, abathengi baphule ngaphezu kwesandiso seFibonacci kwaye bafikelele kwi-84 yeedola.
I-USOIL ikwinqanaba le-70 ye-Relative Strength Index ixesha le-14. Ibonisa ukuba isalathiso sikwindawo ethengiwe kakhulu kwimarike. I-uptrend yangoku inokuthi ijongane nokwaliwa kwinqanaba eliphezulu langoku. Ngaphandle koko, abathengisi baya kuvela ukutyhala amaxabiso ezantsi. Ixabiso lesalathisi lingaphezulu kwe-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50-day SMA ebonisa ukunyuka okungaphezulu.
Kwitshathi yeeyure ze-4, isalathisi sikwi-uptrend. Ixabiso le-WTI liphule ngaphezu kokuchasana kwinqanaba le-83.00. Okwangoku, ngoDisemba 12 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kuphakama kodwa ibuyele kwinqanaba le-1.278 i-Fibonacci extension okanye i-$ 84.22.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Imakethi ifikelele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. Abathengisi banokuthi bavele banyuse amaxabiso ezantsi. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka. I-uptrend iya kuqhubeka ukuya phezulu nje ngokuba imivalo yexabiso ingaphezulu kwemiyinge ehambayo.
I-USDOL ifikelele kwingingqi ethengiwe kakhulu kwimarike kodwa inokujongana nokukhatywa kwi-85.39 yeedola. Ukunyuka kwangoku kunokwenzeka ukuba kupheliswe kwinqanaba lexabiso langaphambili lemarike. I-WTI ithengisa kwi-84.39 yeedola ngexesha lokushicilela.
Phawula: U-Learn2Trade akangomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo mali
USOIL Ityhala ukuya phezulu; Ngaba iiBulls ziyakoyisa i-84 ye-Resistance yeedola?
Ukuhlaziywa: 8 January 2022
Inqanaba lokumelana eliphambilis: $ 80.00, $ 84.00, $ 88.00
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 66.00, $ 62.200, $ 58.00
USOIL ibikwi-uptrend kodwa ingaba iinkunzi zenkomo zinokoyisa i-84 yeedola zokuxhathisa ?. Ukususela nge-2 kaDisemba, isalathisi siye sakhula. I-USOIL iyenyuka ukuze iphinde ibuyele kwixabiso lentengo yangaphambili ye-84 yeedola. I-WTI iya kujongana nokwaliwa kwinqanaba eliphezulu lamva nje. Ukuphakama kwamva nje kube ngummandla othengwe kakhulu kwimarike. Ukusukela nge-25 ka-Okthobha, iinkunzi zisaza kuphuka ngaphezulu kwamva nje. Okwangoku, ngoDisemba 9 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiswa kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye i-$ 81.96.
. I-USOIL ikwinqanaba le-62 ye-Relative Strength Index ixesha le-14. Ibonisa ukuba i-altcoin yinkqubo ye-bullish kwaye iyakwazi ukuqhubela phambili ukuya phezulu. Isalathiso siya kuqhubeka nokunyuka ukuya phezulu ixesha elide i-21-day kunye ne-50-day SMAs zingaphezu kwee-avareji ezihambayo.
Kwitshathi yeeyure ze-4, isalathisi sikwi-uptrend egudileyo. Ixabiso le-USOIL lenza uluhlu lwezinto eziphakamileyo eziphezulu kunye nezisezantsi eziphezulu. Ukunyuka kujongene nokuchasana kwi-80 yeedola eziphezulu. Isalathiso sibuyile ukuze siqhubeke phezulu.
Isalathisi singaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-USOIL ikwisantya esiphezulu. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ziyathambeka ezibonisa ukunyuka. I-uptrend iya kuqhubeka ukuya phezulu nje ngokuba umgca we-bullish trend uhlala ungaphazamiseki.
I-USDOL ikwi-uptrend njengoko ifikelela phezulu kwi-78 yeedola kodwa ngaba iinkunzi zeenkomo zinganqoba i-$ 84 yokuxhathisa ?. Abathengi bazama ukutyhala isalathiso ukuya kwindawo ephezulu yangaphambili ye-84 yeedola. Ukuphakama kwamva nje kukummandla othengiwe kakhulu kwimarike. Isalathiso siya kujongana nokunye ukukhatywa kwinqanaba eliphezulu lamva nje.
I-USOIL (i-WTI) i-Rallies kwi-Overbought Region, ijongene nokuGatywa kwi-78 yeedola
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 80.00, $ 84.00, $ 88.00
USOIL (WTI) yeTrend yexesha elide: Ukuthwala
USETYENZISWA is kwintshukumo ephezulu njengoko ijongene nokwaliwa kwi-78 yeedola. Ixabiso le-index ikhefu ngaphezu kwe-21-day line SMA kodwa ijongene nokugatywa kwi-50-day line SMA. Njengoko isalathiso sijongana nokwaliwa kuphezulu wakutsha nje, i-WTI iya kuwa kwaye ibe luluhlu oluphakathi kwemiyinge ehambayo. Okwangoku, ngoDisemba 9 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba i-WTI iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 ye-Fibonacci extension okanye i-$ 81.31.
I-uptrend yakutshanje iqhube i-USOIL kwinqanaba le-55 ye-Relative Strength Index ye-Period 14. Ixabiso le-WTI lingaphezulu komgca we-21 weentsuku ezihambayo kodwa ngaphantsi kwe-avareji yeentsuku ze-50. Oku kubonisa ukuba isalathiso siya kutshintsha phakathi kwee-avareji ezimbini ezihambayo. Umgca weentsuku ze-21 kunye ne-50-day line line-SMAs zihlahlela phezulu zibonisa ukunyuka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-USOIL iphezulu. I-USOIL ikwi-uptrend egudileyo. Umgca wokuhamba uyazotywa ubonisa amanqanaba enkxaso yamaxabiso. Imarike inyukele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. yemarike. Isalathiso sibuyela kwicala elisezantsi.
Isalathisi singaphantsi kwe-50% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-WTI ikwisantya esiphezulu. Umgca weentsuku ze-21 kunye nomgca we-50 weentsuku ze-SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka. Ixabiso le-WTI liye laphuka ngaphantsi komgca womzila obonisa ukuba i-uptrend iphelile.
I-USOIL ikwi-uptrend njengoko ijongene nokugatywa kwi-78 yeedola. Isalathiso sinyukile kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike. Okwangoku, isalathisi sibuyisela umva kwintshukumo elandelayo ephezulu.
I-USOIL (i-WTI) Iphula i-Overhead Resistance kwi-73 yeedola, iFikelela kwiNgingqi eNcinciweyo
USOIL ikwintshukumo ephezulu njengoko ifikelela kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. Ixabiso lesalathisi liphule ngaphezu kwe-21-day SMA. Isantya se-bullish siyaqhubeka njengoko ixabiso lisondela kwi-SMA yeentsuku ze-50. Eyona nto iphambili kukuba ukuba ixabiso liphule ngaphezu kwe-50-day SMA, ukunyuka okunyukayo kuya kukhawuleziswa. Okwangoku, isalathisi sirhweba kwi-73 yeedola ngexesha lokushicilela. Ukuya phezulu kuyathandabuzeka njengoko imarike ifikelela kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. Okwangoku, ngoDisemba 9 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kunyuka kwinqanaba le-1.618 ye-Fibonacci yokwandisa okanye i-$ 79.19. Ukususela kwisenzo sexabiso, imarike ifikelele kwi-73.72 yeedola.
I-uptrend yamva nje iqhube i-USOIL kwinqanaba lama-52 le-Relative Strength Index yeXesha le-14. I-WTI ikwindawo ye-bullish ye-bullish kwaye iyakwazi ukunyuka ukuya phezulu. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ziyathambeka emacaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-USOIL ikwintshukumo esecaleni. Isalathiso siye saguquguquka ngaphantsi kwe-73 yeedola zokuchasana. Namhlanje, ukuchasana kwe-overhead kuye kwaphulwa njengoko ixabiso lifikelela phezulu kwi-73.95 yeedola.
USOIL – 4 H-iTshati yethu
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sifikelele kummandla othengwe ngokugqithisileyo. Abathengisi banokuvela ukuze banyuse amaxabiso ezantsi. I-uptrend yangoku inokujongana nokukhatywa kwingingqi ethengiwe kakhulu. Umgca weentsuku ezingama-21 kunye nomgca weentsuku ezingama-50 ze-SMA zithambeka ngokuthe tye ebonisa emacaleni.
I-USOIL ikwi-uptrend njengoko ifikelela kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. Ukuchasana kwe-overhead kuye kwaphulwa njengoko ixabiso lifikelela kwindawo ethengiwe kakhulu. Ukunyuka okuya phezulu kuyathandabuzeka njengoko imarike ifikelela kummandla othengwe ngokugqithisileyo. Isixhobo seFibonacci sibonise ukuba imarike iya kufikelela phezulu kwi-$ 79.
I-USOIL (i-WTI) ikwindlela esecaleni, iLwa ukuxhathisa nge-$73.
Ukuhlaziywa: 18 Disemba 2021
Amanqanaba aphikisayo aphambili: $ 80.00, $ 84.00, $ 88.00
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 66.00, $ 62.200, $ 58.00
USOIL ikwintshukumo esezantsi njengoko isilwa nochaso kwi-73 yeedola. Emva kwe-bearish impulse ye-30 kaNovemba, iinkunzi zathenga iidiphu. I-WTI ilungisile ukuya phezulu kodwa ijongene nokuxhathisa kwi-73 yeedola. I-USOIL ibuyela kwicala elisezantsi. Inokufikelela kumazantsi e-69 okanye i-70 yeedola. Emva koko ukunyuka kuya kuphinda kuqalise. Kwinqanaba eliphezulu, ukuba ixabiso liphule ngaphezu kwe-$ 73 yokuchasana, uhlalutyo lwesixhobo seFibonacci luya kubamba. Okwangoku, ngoDisemba 9 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kunyuka kwinqanaba le-1.618 ye-Fibonacci yokwandisa okanye i-$ 78.24.
I-USOIL ikwinqanaba lama-43 leSalathiso saMandla esiNxulumeneyo seXesha le-14. I-WTI ikwindawo ye-downtrend kwaye iyakwazi ukuwela phantsi. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithontelana ukuya ezantsi zibonisa ukuhla. I-SMA yeentsuku ezingama-21 isebenza njengokuchasa izibane zekhandlela.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-USOIL ikwintshukumo esecaleni. Ukusukela nge-7 kaDisemba, iinkunzi ziye zaphinda zavavanywa kwi-overhead resistance kwizihlandlo ezine kodwa azikwazi ukophula. Kwisihlandlo ngasinye, imakethi iya kuwela ezantsi kwe-69 yeedola ephantsi kwaye iphinde iqale phezulu.
Isalathisi singaphantsi kwe-50% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwimo ye-bearish. Umgca weentsuku ezingama-21 kunye nomgca weentsuku ezingama-50 ze-SMA zithe tyaba ngokuthe tye ebonisa emacaleni.
I-USOIL ikwisilungiso esisezantsi njengoko isilwa nochaso kwi-73 yeedola. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokukhatywa kwindawo ephezulu ye-73 yeedola. Abathengi kuya kufuneka batyhale isalathiso ngaphezulu kwe-78 yeedola eziphezulu ukuze baphinde bazuze amandla okunyuka. Okwangoku, isalathisi siyehla ukuya ngaphantsi.
I-USD / CAD Izabalaza zokucima ilahleko njenge-Bearish Sentiment Piles
I-USD / CAD ithengiswe ngeemvakalelo eziphakamileyo ngoLwesihlanu, ukubuyisela ilahleko ethile erekhodiweyo izolo phambi kweseshoni yase-US. Isizathu esisemva kwesantya sayizolo singalandwa ekumiseni kwexabiso le-oyile ekrwada ye-WTI, eyona mveliso iphambili yaseCanada, kunye nezivuno eziphantsi zikaNondyebo wase-US. I-WTI ngoku ithengisa malunga ne-$ 71.00 uphawu okanye -1% namhlanje.
Oko kwathiwa, kubonakala ngathi "igolide elimnyama" akuhoyanga ukumiswa kweengxoxo zenyukliya zase-US-Iran kunye nokuma kwe-US-Sino kwimiba enxulumene ne-Xinjiang.
Ngeli xesha, imeko yentengiso yomngcipheko ekhoyo ayiphumelelanga ekwandiseni inkxaso kwi-US Treasury bond izivuno njengoko i-US Fed iqinisa umgaqo-nkqubo wemali, othe waphembelela imfuno yebhondi yase-US. Akumangalisi ukuba, uvakalelo olufanayo lubeka uxinzelelo kwidola yaseMelika (DXY), ithanda iibhere ze-USD / CAD.
I-USD / CAD Inoxanduva lokuNciphisa okoNgezelelweyo njenge-DCY Yokusilela ukwenza iSimo kwi-Hawkish Fed Stance
Ngaphaya koko, isivuno se-US seminyaka eyi-10 seNondyebo siye sehla kusuku lwesibini olulandelelanayo njengoko i-stock futures kunye ne-Asia-Pacific stocks zihla.
Ngoluvo oluxubeneyo olukhoyo kunye nokusilela kwedola yaseMelika ukwenza imali kwi-US Fed's hawkish stance, ii-USD / CAD iibhere kufuneka ziphindeke kabini kwizikhundla ezimfutshane kungekudala. Nangona kunjalo, ikhalenda ibonisa isiphelo esizolileyo kwiveki exakekileyo, isenza kube bubulumko kubarhwebi ukuba balindele i-catalyst (s) exhasayo yempembelelo entsha.
Oko kwathiwa, uLoonie unokuthumela umlenze phantsi kwiiyure ezizayo kwaye mhlawumbi uvale iveki kwi-bearish note.
tags Forex, iindaba, USD / CAD, WTI
I-USOIL (i-WTI) iphinda ibuyise i-Bullish Momentum kodwa i-Battles Resistance kwi-73 yeedola
Ukuhlaziywa: 11 Disemba 2021
I-USOIL ibikwintshukumo esezantsi. Ngomhla we-10 kaNovemba, i-WTI yajongana nokukhatywa ukusuka phezulu kwi-84 yeedola. I-USOIL yehle yaya kutsho kuma-62 eerandi njengoko iinkunzi bezithenga iidiphu. Ukususela ngo-2 kaDisemba, isalathisi senze ukulungiswa okuphezulu njengoko kufikelele kwi-73 yeedola. Okwangoku, ngoDisemba 9 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kunyuka kwinqanaba le-1.272 ye-Fibonacci yokwandisa okanye i-$ 76.11.
I-USOIL ikwinqanaba le-45 ye-Relative Strength Index yeXesha le-14. Isalathiso sikwi-downtrend zone kwaye siyakwazi ukuwela phantsi. I-USOIL ine-bearish crossover. Oko kukuthi, i-21-day SMA iwela ngaphantsi kwe-50-day SMA ebonisa umyalelo wokuthengisa. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zihla zisihla zibonisa ukuhla.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathisi senza ukunyuka okunyukayo. Iinkunzi zenkomo ziye zaphuka ngaphezu kwee-avareji ezihambayo njengoko imarike ifikelela phezulu kwi-73 yeedola. Okwangoku, ngoDisemba 7 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kunyuka kwinqanaba le-1.618 ye-Fibonacci yokwandisa okanye i-$ 77.28.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-50% yestochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwisantya esiphezulu. Umgca weentsuku ze-21 kunye nomgca we-50 weentsuku ze-SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
I-USOIL iphinde yafumana amandla okunyuka kodwa okwangoku yophuka ngaphezulu komndilili ohambayo. I-WTI iya kuphuma kwisilungiso esisezantsi ukuba abathengi batyhala i-altcoin ngaphezu komyinge ohambahambayo okanye i-78 yeedola eziphezulu.
I-USOIL (i-Wti) Ifikelela kuMmandla oThengisiweyo kakhulu njengoko abathengi bephuma
Ukuhlaziywa: 4 Disemba 2021
USOIL ebekwintshukumo ehlayo. I-WTI's downtrend ifikelele ekudinweni kwe-bearish. Imakethi inqabile ukuya kwixabiso eliphantsi le-62.46 yeedola njengoko iinkunzi zathenga iidiphu. Ngomhla we-20 ka-Agasti, i-USOIL yawela kwinqanaba elifanayo lexabiso njengoko isalathisi siphinde savela ngaphezu kwenkxaso yangoku. Okwangoku, ngoNovemba 4 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-38.2% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kuwela kwinqanaba le-2.618 i-Fibonacci extension okanye i-$ 65.25. Ukususela kwisenzo sexabiso, i-WTI iyaguquguquka ngaphezu kokwandiswa kweFibonacci.
I-USOIL ikwinqanaba le-30 ye-Relative Strength Index yeXesha le-14. Isalathiso sifikelele kwingingqi ethengiswa kakhulu kwimarike. Uxinzelelo lokuthengisa lufikelele ekuphelelweni kwe-bearish. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithontelana ukuya ezantsi zibonisa ukuhla.
USOIL (WTI) phakathi kwexesha eliphakathi: Ukuthwala
Kwitshathi yeeyure ze-4, isalathisi siyawa kwaye sikwisiteshi esihlayo. Ixabiso le-WTI laphule i-SMA yeentsuku ezingama-21 kwaye labuyela umva ukuze liqalise ukuthengisa uxinzelelo. Uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka ukuba ixabiso liqhekeza ngaphantsi kwe-64 inkxaso ye-$.
Isalathisi singaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwimo ye-bearish. Umgca weentsuku ze-21 kunye nomgca we-50 weentsuku ze-SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
I-USOIL isekulungiso olusezantsi. Uxinzelelo lokuthengisa lufikelele ekuphelelweni kwe-bearish njengoko imarike ifikelela kwindawo ethengisiweyo.
I-USOIL (i-WTI) Iyancipha ukuya kwi-68.16 yeedola njengeeBhere ezisongela ukufutshane
Ukuhlaziywa: 27 Novemba 2021
USOIL ngoku ikwi-downtrend. Ngo-Okthobha we-26 uptrend, i-WTI ifumene ixabiso layo eliphezulu kwi-84 yeedola kodwa yachaswa. Ekuqaleni, i-USOIL yehla yaya kutsho kwi-78 yeedola ngenxa yokuchasa okokuqala. Abathengi batyhalele i-WTI kwixabiso layo eliphezulu nto leyo ebangele ukwaliwa ngakumbi. I-USOIL yawa kwaye yaphuka ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Okwangoku, ngoNovemba 22 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extension okanye i-$ 72.38. Ukususela kwixabiso, i-WTI inqabile ngaphaya kwenqanaba leFibonacci.
I-USOIL ikwinqanaba lama-26 leSalathiso saMandla esiNxulumeneyo seXesha le-14. I-WTI iwele kummandla othengisiweyo kwimarike. Intshukumo eyongezelelekileyo yokuhla ayinakwenzeka. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka. Imiyinge ehambayo yenza i-U-turn ezantsi.
Kwitshathi yeeyure ze-4, isalathisi sihamba phantsi njengoko ixabiso liqhekeza ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo. I-downtrend iye yanda ukuya kwi-low 68.16 yeedola. Isalathiso sisenokwala ngakumbi. Okwangoku, ngoNovemba 21 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-61.8% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extension okanye i-$ 68.80.
Isalathisi singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oko kukuthi, iwile kwindawo ethengisiweyo yemarike. Uxinzelelo lokuthengisa luya kufikelela esiphelweni. I-USOIL ine-bearish crossover. Oko kukuthi, umgca weentsuku ze-21 uwela ngaphantsi kwe-50-day line SMAs ebonisa uphawu lokuthengisa.
I-USOIL iye yahamba phantsi kwaye isalathisi sifikelele ekuphelelweni kwe-bearish. I-USOIL iye yawa kakhulu kwi-downside. Silindele ukuba abathengi bavele kwindawo ethengiswa kakhulu.